Bitrix24: Middi Ciidan Iswiisarland ah oo Wada Shaqeyn Ganacsi | Martech Zone
Kooxaha suuq geyntu badanaa waa koox aan kala sooc lahayn oo ka mid ah suuqleyda gudaha, ilaha wakaaladda dibadda, iyo kuwa madaxbanaan ee laga yaabo inay ka shaqeeyaan xafiisyada adduunka oo idil. Waxaan soo marnay tan oo dhufto oo ka caawiyay tan - laga bilaabo wadaagga khadka tooska ah ee la wadaago, barnaamijyada shabakadaha bulshada ee gudaha, kalandarrada la wadaago, iyo in ka badan… iyo in badan oo ka mid ah aaladaha ay leeyihiin isdhexgal, ku dhowaad qalab kasta oo suuq geynaya qalabkiisu wuxuu u egyahay sidii bahalka Frankenstein halkii laga heli lahaa suite isku xidhan.
10% laga dhimayo Macaashka sanadlaha ah ee Bitrix24
Bitrix24 waxay siisaa gabi ahaanba wada shaqeynta bulshada, isgaarsiinta iyo qalabka maaraynta ururada. Waa kuwan muuqaalka muuqaalka guud:
Tilmaamaha Bitrix24 waxaa ka mid ah
Shabakada bulshada - Shabakad bulsheed oo gudaha ah ayaa kuu oggolaaneysa inaad iskaashi la sameyso si fudud, dhaqso iyo waxtar badan. Hel jawaab celin deg deg ah, la wadaag fikradaha, abuur kooxo kooxeed kana qayb qaado shaqaalahaaga.
Hawlaha iyo mashaariicda - Laga soo bilaabo ToDos shakhsi ahaaneed iyo shaqooyin fudud ilaa mashaariic adag.
Wadahadal kooxeed iyo muuqaal - Qalabka isgaarsiinta waqtiga dhabta ah laga bilaabo shirarka fiidiyowga ilaa wada hadalka kooxda.
Maareynta dukumiintiyada - Sug amniga dukumiintiyada kaydinta tooska ah, tafatirka isticmaalaha badan ee khadka tooska ah iyo dukumiintiyada shaqooyinka oggolaanshaha dukumiintiyada. La wadaag faylasha iyo faylalka si fudud shaqaalahaaga, oo ka hel xogtaada qalab kasta.
Jadwalka iyo Qorshaynta - Ku martiqaad asxaabtaada kulan, jadwal u samee ballamaha macaamiisha si toos ah CRM, u samee jadwallada gaarka loo leeyahay iyo kuwa la wadaago naftaada, kooxaha shaqada, ama shirkadda oo dhan.
Email - Si toos ah ugala soo xiriir koontadaada Bitrix24.
CRM iyo maamulka kooxda iibinta - Laga soo bilaabo kaydinta macluumaadka macaamiisha illaa iimaylka suuqgeynta iyo hoggaanka tooska ah ee hogaanka.
Telefoon - Ka wac wicitaanada macaamiishaada iyo dadka kula shaqeeyaba boggaaga adoo hal gujinaya. Gali oo duub wicitaanada taleefanka si toos ah gudaha CRM. Waxaad u isticmaali kartaa Bitrix24 sidii xarun wicitaan wicitaan ah.
Maaraynta Khayraadka Shaqaalaha - Diiwaanka shaqaalaha, jaantuska maqnaanshaha, bogga is-adeegga, maareynta waqtiga, warbixinnada shaqada, saldhigga aqoonta iyo 20 + qalabka kale ee HR.
mobile - waxay ka shaqeysaa iPhone-kaaga, iPad-ka ama Android-kaaga sidoo kale. Waxaad ku qaadan kartaa koontadaada Bitrix24 taleefankaaga ama kaniinigaaga waligiisna wuxuu ahaan doonaa hal qasabad oo qura.
More - eLearning, helpdesk, management records, Company Pulse, Bitrix24TV, Suuqa, API iyo xitaa nidaamka maaraynta waxyaabaha.
Shaacinta: Waxaan u adeegsaneynaa xiriiriye ku xiran boostadan oo bixisa 10% ayaa ka dhimaysa rukunka sannadlaha ah ee Bitrix24.
Tags: bitrix24kalandarkaCRMmaaraynta xiriirka macaamiishahrilaha aadanahashabakadda bulshada ee gudahaiskaashiga wareegaQorsheyntaMaamulka mashruucamaaraynta hawsha